Wenziwa kanjani umhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wadalwa kanjani uMhlaba
IsiJalimane Portillo | | Isayensi yezinkanyezi, I-Geology
Ngokuqinisekile wake wazibuza umhlaba wenziwa kanjani. Uma ungumKatolika, bazobe bekutshele ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba nazo zonke izidalwa ezihlala kuwo. Isayensi, ngakolunye uhlangothi, iphenye iminyaka eminingi ngemvelaphi yoMhlaba nokuthi uguquke kanjani zonke lezi zigidi zeminyaka. Kulokhu, kufanele ucabangele isikhathi sokuma komhlaba, ngoba isilinganiso sokuziphendukela kwemvelo koMhlaba sibalekela esikalini somuntu.
Kule ndatshana sizochaza ngokujulile ukuthi uMhlaba wadalwa kanjani nokuthi uguquke kanjani kuze kube namuhla.
1 Ukwakheka Komhlaba
2 Wenziwa kanjena uMhlaba
3 Ukwakheka komkhathi womhlaba
4 Ishawa iMeteor
Imvelaphi iplanethi yethu enayo ivela i-nebula uhlobo lwe-protosolar. Kwaqala eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-4600 edlule. Ngaleso sikhathi sokudalwa, wonke amaplanethi ayesesimweni sothuli olunesisindo esiphansi. Okusho ukuthi, zazisalokhu zakhiwa futhi zazingenawo umoya noma impilo (endabeni yoMhlaba). Ukuphela kwento edale ukwenziwa kwempilo eMhlabeni ibanga elihle ukusuka eLangeni.
Yokuba khona kwefu legesi okwadala ukushayisana nezinhlayiya zothuli ezazidlula lapho isimiso sonozungezilanga ukuzulazula kokuqhuma okukhulu kwenziwa. Lezi zinhlayiya zazincipha kulokho esikwaziyo namuhla njengesifunda seMilky Way esibizwa ngoKhozi Nebula noma izinsika zendalo. Lawo mafu amathathu othuli negesi yiwo asiza ukukhiqiza izinkanyezi ezintsha lapho ziwa ngenxa yamandla adonsela phansi.
Ubuningi bezinhlayiya zothuli bujiyile neLanga ladalwa. Ngesikhathi esifanayo lapho kwakhiwa amanye amaplanethi akha uhlelo lwonozungezilanga, kanjalo neplanethi yethu ethandekayo.
Wenziwa kanjena uMhlaba
Umthamo omkhulu wegesi njengamaplanethi I-Jupiter y Saturn sasikhona ekuqaleni. Ngokuhamba kwesikhathi, kwaba yisimo esiqinile ngokupholisa uqweqwe. Lokhu kudalwa koqweqwe lomhlaba bekudala ukwehluka izingqimba zangaphakathi zomhlabaa, ngoba i-nucleus ayiqinile. Okunye ukuqweqwa bekuthatha amandla wamanje esiwaziyo njengokuthi Amapuleti eTectonic.
Umnyombo woMhlaba uketshezi olwenziwe ngensimbi encibilikisiwe namaminerali we-nickel kanye ne-magma. Izintaba-mlilo ezakhiwa ngaleso sikhathi zazisebenza futhi zazikhipha udaka kanye nenani elikhulu lamagesi futhi zakha umkhathi. Ukwakheka kwayo kuguquliwe eminyakeni edlule kuze kufike ekwakhiweni kwayo kwamanje. Izintaba-mlilo zibe yizinto ezisemqoka ekwakhiweni koMhlaba noqweqwe lwawo.
Ukwakheka komkhathi womhlaba
Umkhathi akuyona into eyakheke ngokuzumayo noma ngobusuku obubodwa. Kunokukhishwa okuningi okuvela ezintabeni-mlilo okukhishwe ezinkulungwaneni zeminyaka ukukwazi ukwakha ukwakheka esinakho namuhla futhi, ngenxa yalokho, esingaphila ngakho.
Isisekelo somoya wokuqala sasakhiwe nge-hydrogen ne-helium (amagesi amabili amaningi kakhulu asemkhathini). Esigabeni sesibili sokukhula kwayo, lapho inani elikhulu lama-meteorite lishaya eMhlabeni, umsebenzi wentaba-mlilo wabuye wakhuliswa.
Amagesi aqhamuka kulokhu kuqhuma abizwa ngokuthi umoya wesibili. Lawa magesi ikakhulukazi ayengumphunga wamanzi nesikhutha. Izintaba-mlilo zikhiphe inqwaba yamagesi anesulfure, ngakho-ke umkhathi wawunobuthi futhi akekho owayengasinda kuwo. Lapho wonke la magesi asemkhathini ehlangana, imvula yakhiqizwa okokuqala. Yilapho, emanzini, amagciwane okuqala we-photosynthetic aqala ukuvela. Amagciwane enza i-photosynthesis akwazi ukwengeza umoya-mpilo emoyeni onobuthi kakhulu.
Ngenxa yokuncibilika komoya-mpilo olwandle nasolwandle, impilo yasolwandle ingaqalwa. Ngemuva kweminyaka yokuziphendukela kwemvelo kanye neziphambano zofuzo, impilo yasolwandle yathuthuka kakhulu kangangokuba yaphelela phesheya yaveza impilo yasemhlabeni. Esigabeni sokugcina sokwakhiwa komkhathi, ukwakheka kwayo sekuvele njengoba kunjalo nanamuhla I-78% nitrogen ne-21% oxygen.
Umhlaba ngaleso sikhathi wahlaselwa ngamameteorite amaningi adala ukwakheka kwamanzi ketshezi nomoya. Kusuka lapha kwavela nomcabango wokuthi ososayensi bakubiza ngokuthi yiTheory Chaos. Futhi ukuthi kusukela ekubhujisweni, uhlelo olunentropy enkulu lungenza impilo futhi luye ezingeni lokulingana esinalo njengamanje.
Emvuleni yokuqala eyenzekile, kwakhiwa izingxenye ezijulile zamagxolo ngenxa yobucayi obabunabo ngaleso sikhathi ngaphambi kwesisindo samanzi. Yakhiwa kanjalo i-hydrosphere.
Ukuhlanganiswa kwazo zonke izinto ezakha uMhlaba kwenza ukuthi impilo ikhule njengoba sazi. Okuningi kokuthuthuka kwethu kungenxa yomkhathi. Nguyena osivikelayo emisebeni yelanga eyingozi, ukuwa kwama-meteorite kanye neziphepho zelanga okungabhubhisa zonke izimpawu nezindlela zokuxhumana zomhlaba.
Amaplanethi azungeze izinkanyezi nokwakheka kwawo aqhubeka nokuphikisana emhlabeni jikelele. Kodwa-ke, inqubo ebandakanyekayo ekwakheni iplanethi ayikacaci ngokuphelele. Inkinga ukuthi, njengoba ngishilo ekuqaleni kwendatshana, isikhathi se-geological sikhona lapha hhayi esikalini somuntu. Ngakho-ke, ukwakheka kweplanethi akuyona into esingayifunda noma siyibone inqubo yayo. Kufanele sincike ebufakazini besayensi nasemibonweni.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi umhlaba wenziwa kanjani. Inkolelo yalowo nalowo maqondana nokuqeqeshwa kwabo imahhala, lapha simane sinikeze inguqulo yesayensi ngoba iyibhulogi yesayensi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Wadalwa kanjani uMhlaba
I-DANA, Ukudangala Okuhlukanisiwe Emazingeni Aphezulu